रेखाचित्र - यो आफ्नो बच्चा समय खर्च गर्न केवल तरिका हो। यो बच्चा राम्रो, रंग भेद तिनीहरूलाई मिश्रण सिक्न र थप स्थानिक कल्पना विकास गर्न मद्दत गर्छ र कलात्मक स्वाद सिकाउँछ। त्यसैले चित्रकला पाठ धेरै उपयोगी छन्। र, को पाठ्यक्रम, यो मामला मा महत्वपूर्ण हाम्रो कल्पना हो। उहाँलाई धन्यवाद, छोराछोरीलाई रेखाचित्र एक अर्को सदृश छैन।
तर कल्पना परे, तपाईंले केही ज्ञान र सीप छ, चित्र मा वस्तु एक चिन्न बाहिर गरिएका भनेर, र अरूलाई के चित्रण गरिएको अचम्मको छैन आवश्यक छ। केही बच्चाहरु र आमाबाबुको रेखाचित्र मा लोकप्रिय कार्यशालाओं को सबै किसिमका किनभने। र आज हामी तिनीहरूलाई एक पकड हुनेछ। अर्थात्, यो बन्दागोभी सही कसरी रंग गर्न सिक्न। यस कठिन छैन। हामी सिर्फ निर्देशनहरू पालना गर्न आवश्यक छ।
कसरी बन्दागोभी आकर्षित गर्न र हामी के गर्न आवश्यक के? निश्चित कागज, अतिरिक्त रेखा मेटाउन नरम रबड, एक सरल पेन्सिल हुन। साथै, तपाईँले एक बन्दागोभी आकर्षित अघि, हामी रंग के छ सम्झना र उपयुक्त रंग चयन गर्नुपर्छ। त्यसैले, अर्थ हामी हरियो पेन्सिल आवश्यक हुनेछ। , प्रकाश र अँध्यारो, साथै लिनु सेतो यसलाई हाम्रो उपयोगी पनि छ - यो राम्रो दुई लिन छ।
त्यसैले, हामी बन्दागोभी चरणमा कसरी रंग गर्न चाहन्छौं। हामी के पहिलो गर्नुपर्छ? हामीलाई मानसिक उनको भाग कल्पना गरौं। सामान्य बन्दागोभी एक राउन्ड टाउको र यो चारै ओर कि घुम्रेको शीर्ष पात हुन्छन्। त्यसैले, कि यो छ, र हामी आकर्षित छौँ। यो बन्दागोभी छवि गुलाब गर्न त्यसैगरि - ती दुबै एक बाक्लो गोलाकार आधार सुरु, र त्यसपछि, कलाकार धन्यवाद, पात "बढ्छ।"
कसरी पेन्सिल बन्दागोभी चरणमा आकर्षित गर्न?
ठीक छ, पहिलो व्याख्या तल प्राप्त। पानामा को बीचमा टाउको भविष्य आकार को मंडल मा अवस्थित हुनुपर्छ। यो दबाब बिना पेन्सिल मा आकर्षित गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि तपाईं पहिलो दुई पानाहरू बनाउनु पर्छ - तिनीहरूले टाउको आसन्न हुन छ। यो गर्न, सर्कल भित्र साधारण शुरुवात र अन्त्य हुनेछ जो दुई बाङ्गो लाइनहरु, कोर्नुहोस्। तिनीहरूले अलिकति, वेभी वर्तमान मा बन्दागोभी एक पत्ती रूपमा कुना बाहिर हुनुपर्छ। अब एक गाढा हरियो पेन्सिल लिन र बाहिर प्रत्येक परिणामस्वरूप पाना को आकृति, अर्थात् आधा सर्कल र वक्र जो यो अलग आकर्षित।
दोस्रो चरण पात को छवि हुनेछ। सामान्यतया cabbages एक सानो disheveled हेर्न। त्यसैले हामीले। हाम्रो "टाउको" वरिपरि तीन वा चार घटता तरंग लाइनहरु पात चित्रण हुनुपर्छ। तिनीहरूले पनि गाढा हरियो पेन्सिल को आकृति वरिपरि कटौती गर्न आवश्यक छ। अब तेस्रो चरण उत्प्रेरित गर्न समय छ। हामी हाम्रो टाउको रंग गर्न आवश्यक छ। गोभी छोड्दा किनाराको आधार भन्दा सामान्यतया गाढा छन् मा, त्यसैले गाढा पेन्सिल लागि सुझावहरू प्रयोग गर्नुहोस्, र त्यहाँ एक बन्दागोभी बाला, प्रकाश हुनुपर्छ र छाया अर्को एक छाया देखि संक्रमण बनाउन जहाँ एक स्थानको लागि। यो अन्तिम, तर धेरै महत्त्वपूर्ण विवरण आकर्षित गर्न रहनेछ।
सबै बन्दागोभी धेरै देखिने नसाहरु छोड्छ, र किनभने तिनीहरू पनि सबै भन्दा "abstraktsionistskoe" यो तरकारी को छवि चिन्न छ। यो तिनीहरूको लागि हामी सेतो पेन्सिल आवश्यक छ। चित्रित पात माथि आकर्षित। केन्द्र मा रूख एक शाखा रूपमा, यो पक्ष प्रतिनिधित्व गर्न आवश्यक छ, एउटा प्रमुख नस, जान्छ।
र हाम्रो तरकारी पकाएको छन्। अब यो बन्दागोभी कसरी रंग स्पष्ट छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो धेरै सजिलो छ। यस्तो कौशल सिकाउन र छोराछोरी, र वयस्क सजिलो छ। एक cabbages त पक्कै केहि संग भ्रमित कुनै एक चित्रित।
यस चित्रकला को वर्णन "स्वर्ण शरद" Polenov: प्रशंसा र सपना
"नरक" Botticelli - चित्रकला, को "ईश्वरीय हास्य" को एउटा दृष्टान्त
क्लोइजन: मास्टर वर्ग। प्रविधी क्लोइजन
कलाकार Koler Dzhon
ENT सर्जरी (ENT)
सेन्ट पीटर्सबर्ग अन्तर्राष्ट्रिय कमोडिटी एक्सचेन्ज: विवरण र कार्य
मास्को मा Bloch इपिफ्यानी Name गिरजाघर। को गिर्जाघर मा प्रतिमा
SMART टेक्नोलोजी: हार्ड ड्राइव को आत्म-निदान को सामान्य सिद्धान्त
Verdure: बीउ देखि बढ्दै
को जाडो लागि चामल सलाद कसरी संरक्षण गर्न
मा समाज सम्बन्ध: sexism - छ ...